百貨店 | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » 百貨店
Updated: 2016-06-21 15:58
တိုကျို မစ်ဒ် တောင်း
တိုကျို မစ်ဒ်တောင်း ဟာ အဆင့် တန်း မြင့် တဲ့ ဈေးဆိုင် တွေ ကဖေးတွေ နဲ့ စားသောက် ဆိုင်တွေ ပြီး တော့ ရုံး ခန်းတွေ ၊ အဆင့်မြင့် ဟိုတယ်တွေ ၊ အိမ်ယာတွေ၊ အနုပညာပြတိုက်တွေ ၊ နောက် ပြီး ပန်း ခြံ အစရှိ သည်တို့...
Updated: 2015-12-16 15:15
တင်းဂျင်းIMSဟာ ဖက်ရှင်အဆောက်အဦးဖြစ်ပြီး တင်းဂျင်းဘူတာရဲ့အနီးတွင်တည်ရှိပါတယ်။ ဖက်ရှင်စတိုး၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း၊ အိမ်တွင်းအလှဆင်ဆိုင်များက မိန်းအထပ်တွင်ရှိပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်များလည်းရှိပြီး အချို့ဆိုင်များ...
Updated: 2015-05-15 17:06
ရုပ်ရှင်ရုံ၊ အနုပညာ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ရှောပင်း၊ တည်းခိုခန်းများစုဝေးနေသော အင်တာတိန်းမင့်နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘရန်းဆိုင်အမျိုးမျိုးများစွာရှိတဲ့ ဟကတရေးဗားရိန်းအိနိမိနိမနိမို နဲ့အခြားဆိုင်ခန်းများလည...
Updated: 2015-05-15 17:05
အမြူ့စ်ပလာဇာ၊အထူးထုတ်ကုန် ဆိုင်ပေါင်း ၂၃၀မှစကာ ခရူးရူးမှ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော တိုခရူးဟန်းစ်၊ ဂျပန်အဆင့်မြင့်စားသောက်ဆိုင်ဇုန် စီးတီးဒိုင်းနင်းကူးတင်း၊ အမိုးပေါ်ဂါးဒင်း ဆုဘမဲနို့မိုရိဟိရိုးဘ၊ ပွဲတော်ခန်...
ဖုခုအိုက မိဆုကိုရှိဟာ ဖုခုအိုကရှိ ရှော့ပင်းစင်တာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နီရှိတဲဆုတင်းဂျင်းဘူတာရဲ့ ဆိုလာရီးယားဘူတာရုံနဲ့တောက်လျှောက်ဆက်ထားပါတယ်။
Updated: 2015-05-15 17:04
ဒိုင်းမာရုဟာ အလွန်ကြီးသော ရှော့ပင်းစတိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီး တင်းဂျင်း၊ဖုခုအိုကတွင် တည်ရှိပါတယ်။ ဘရန်းဆိုင်များ၊ အိမ်သုံးအလှဆင်ပစ္စည်းများရှိပြီး စားသောက်ဆိုင်အများအပြားရှိပါတယ်။